Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi Iley Waa Dambiile ka Mushtara Dhiiga Shacabka – Dhambaal laga soo diray Jigjiga
Cabdi Iley Waa Dambiile ka Mushtara Dhiiga Shacabka – Dhambaal laga soo diray Jigjiga
Cabdi iley intii uuna hogaanka noqonin wuxuu ahaa nin lashaqeeya ciidamada una geeya wararka wuxuuna odhan jiray hadaan xilqabto waligey kama dhacayo xilkaas in aan kor usii socdo mooyee, wuxuuna ku salayn jiray waxaan garanayaa waxa ay Itobiya dooneyso iyo waxa ay kugu dalacsiin karto. Sidoo kale waxaan garanayaa waxa farax galinaya taas oo ah in aad wax disho inta ayna dil ku dhihin, in aad wax xidho inta aayna xidh kudhihin, in aad badasho dhaqanka iyo diinta islaamka inta aayna badal kudhihin. Guud ahaan in aad ninka ciidanka ah ugu horeyso dilka, dhaca iyo wixii dhibaato ku noqonkara dadka shacabka ah, taasaana ah wax kaliya ee aad Ethiopia isku aamini kartaan.
Hadab markii uu hogaanka noqday kadib Cabdi iley wuxuu go’aan saday in uu dhigo rikoodh ay Itobiya kusii aamini karto kursigan madaxweynahana uu ku qabsan karo isagoo raacaya formulihii uu horay u aaminsana. Kadibna wuxuu dhigay rikoodh aan horay caalamka cid udhigtay jirin oo ah gumaad iyo in aan waxba ladhaafin, taasoo kaliftay ilaa heer uu Cabdi iley vedio iska duubo isagoo dad leynaya taasoo uu ku aaminsiinayey saxiibkii Abraham wolde oo ay markaa isku cusbayeen.
Hadaba markii uu madaxweynaha noqday kadib wuxuu siyaasad kadhigtay dhawr qodob oo kala ah;
1. Inuu dhiig faraha kula sii jiro siina dardargaliyo hanaankii uu kusoo dalacay isagoo sii xoojinaya ciidanka liyuu booliska wuxuu go’aansaday in uu sii ahaado hogaamiyaha dadban ee ciidanku sida tooska ah ugu xidhan yihiin una hawlgaliya wuxuuna ilaa hada haystaa thuraye uu ku hawgaliyo kulana xidhiidho ciidankaas, sidoo kale wuxuu kor usii qaaday guubabada iyo heesaha lagu hawgalinayo ciidankaas ee xaga dagaalka. Wuxuu kale oo uu sameeyey in uu culumada uu iimankoodu hooseeyo uu horkeeno liyuu booliska uguna qudbadeyaan ciidankaas in ay yihiin ehelujano oo janada lageeynayo ciidii kaga dhimata sidoo kale in JWXO ay yihiin qaadicul dariiq ay tahay in lala dagaalamo. Waxaa kale oo uu bilaabay in uu ka dhigo saraakiisha ciidankaas dad aan waxba barinin wuxuuna uxulay ninba ninkii uu ka xumaa uguna dibjirsanaa, shuruuda dalacsiintuna waxaay noqotay ninkii cid soo dila ama soo dhaca ama soo xidha walalkii ama cid nabadiid ku eedeeya.
2. Inuu isla helo awood ciidan iyo awood dhaqaale, wuxuuna bilaabay in uu sameeysto shirkado wax walba qaata oo hadana magac dawli ah wata wuxuuna noqday qaataha iyo bixiyaha mashaariicda deegaanka oo dhan wuxuuna qaatay inuu
meelkasta oo uu qoyaan yaalo uu faragaliyo isla markaasna ay arintu noqoto ama in uu qaato ama hadii kale cid isaga u adeegaysa uun in wax lasiiyo gaar ahaan qofba qofka uu kaxunyahay.
3. Inmiisaniyada degaanku noqoto oo kaliya in jeebadiisa gasha iyo in uu laaluush u
siiyo xubno kamid ah federalka.
4. Inuu sigaar ah habeen iyo maalinba kor ugu sii qaado xidhiidhka isaga iyo general Abraham sidoo kale in uu habeen walba warbixin been ah iyo filimo aan jirin in uu udiroEthiopia.
5. Inuu isku diro kalana jibiyo qabiilada deegaanka kuwada nool isagoo isticmaalaya awood ciidan iyo mid dhaqaale. Tusaale 1 : isagoo taas usii maraya in uu is maandhaaf dhexdhigo dadka isagoo qaarna soo dhaweynaya oo siinaya wax aayna xaq ulahaayn qaarna cadaadinaya, iyadoo labuun buuninayo sida loo cadaadinayo qaarna labuun buuninayo sida wax loo siinayo taasoo uu uga gollahaa in aay is qooransadaan. Tusaale 2 : in uu mar dadka Ogaadeenka ah cuqdad iyo naxli kala dhexdhigo marna Ogaadeenka iyo qabiilada kale uu dhexdhigo si uu marba mid ugu dhexdhuunto. Tusaale 3: dad ayey liyuu boolisku kas u dilayaan ama xoolohoodii ayeey u dhacayaan markaasaa la odhan waxaa idinka dilay ama dhacay hebal oo JWXO katirsan ee maad soo aarataan.
Hadaba inkasta oo uu Cabdi iley aad isugu taxalujiyey in uu deegankan kadhigo meel aay qabiilo isku dilayaan hadana wax lataaban karo oo arintaas uu kaga guuleystay ilaa hada marjiro waxaana sabab u ah dadka badankiisa oo fahansan ujeedooyinkiisa guud ahaan.